ဝန်ဆောင်မှု | Holmbygden.se
ဒီနေရာတွင် Holmes အတွက်ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
အရေးပေါ်အခြေအနေအင်ဖို – ဒေသအလိုက် Holmes အတွက်နှလုံးအကူစက်
ငါနှလုံးအကူစက်Anundgård (နှလုံးအကူစက်) တစ်ဦး ambulands အဆိုပါမရောက်ခင် cardiac arrest နဲ့ကယ်တင်ဘို့ positioned. Olle Frisk ၏အရေးပေါ်အတွက်ထုတ်ယူနှလုံး starter (မုတ်) alt +. တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်. Holmes ခုနှစ်တွင်လည်းမတော်တဆမှုအတွက်အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်သတိပေးတဲ့သူဆွီဒင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်နေအိမ်သို့၏ပထမဦးဆုံးပါဖြစ်ပါသည်. Holmes အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် cardiac arrest နဲ့အကူအညီအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, holmbygden.se/akut.
ထိတှေ့: Olle Frisk 0730-484 511, 0692-30123.
Anund Manor ကျောင်း
ဤတွင်, မူကြိုကနေဆဌမတန်းမှကျောင်းသား. အဆိုပါကျောင်းတွင်ကျောင်းသားအားလုံးမြင်ကြပါတယ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်း. အဆောက်အဦးအပြင်အပန်းဖြေကျောင်းရဲ့အာရုံဖြစ်ပါတယ်.
ထိတှေ့: staffroom – 0692-300 62,
Rektor ရွိုင်း Resare 060- 658 33 01, 073-275 29 83 roy.resare@sundsvall.se (f.n ဆုံးမဩဝါဒပေး. Liden သို့ပြောင်းရွှေ့)
မူကြိုကနေသားသမီးများ၏တစ်ဦးချင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည် 1 –5နှစ်ပေါင်း. ဘာသာစကားအသိအမြင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မူကြို, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအလုပျနှငျ့အဖြစ်အရေးကြီးသောlärområden play. ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားရန်ကလေးများအခွင့်အလမ်းပေးကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပပညာရေး.
ထိတှေ့: မူကြို – 0692-301 54,
မူကြိုဒါရိုက်တာ Peder Söderman 060-658 32 80, peder.soderman@skola.sundsvall.se
တစ်ဦးကိုလှိမ့အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်ရွာကဒီမှာရှိမှတ်တိုင်များနှင့်အတူHolmsjönန်းကျင် bookmobile အလှည့်ပြုကြအဖြစ်. ဒီနေရာတွင်အခြားသူတွေအကြား, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. အချိန်ဇယား, အပိုမှတ်တိုင်များနှင့်သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စာအုပ်ငှားချင်တယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းများ. ဆက်ဖတ်ရန်.
အဆိုပါHolmsjönလျှောက်ဖိုင်ဘာဆွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာများတွင်အကိုင်းအခက်နှင့်အတူ fixed ဘရော့ဘန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း Holmes ဖိုင်ဘာစီမံကိန်းကို. ယခင်လည်းAnundgård-Östbynကတဆင့်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ fiber optic cable ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက. ထို့အပြင်မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဗဟုလည်းမရှိ. ဆက်ဖတ်ရန်.
130123: ur function ကို. HBU ရွာအတွက်လောင်စာထောက်ပံ့ရေးဖြေရှင်းဖို့လုပ်ဆောင်နေသည်.
150120: အသစ်ကဓာတ်ဆီဆိုင်အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုဤနေရာတွင် Read.
Holmes အတွက်ဘုရားကျောင်းတစ်ဦးအရောင်းစက်နှင့်အတူတစ်ဦးလောင်စာဆီစုပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်စတိုးဆိုင်မှာ. အဆိုပါစုပ်စက် 95-ကထုတ်တဲ့ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ရှိပါတယ်. စတိုးဆိုင်လက်ရှိတွင်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း p.g.a ဘို့ဖြစ်ပါတယ်. ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာပြောင်းရွှေ့.
ဒီမှာရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက.
လိုင်း 28 နေ့စဉ်အကွာအဝေး Holmes-Sundsvall operate. ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အချိန်ဇယားနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကတှေ့လိမျ့မညျ ဒီမှာ.
Träpatronenပို့ဆောင်ရေး & ခရီးသွားလုပ်ငန်း 0692-304 00.
Holmes ခုနှစ်တွင်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာတစ်ခုသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းရှိသောသူတို့အဘို့အိမ်ကအကူအညီ Sundsvall ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ၏မြို့တော်စည်ပင်ကအတွက်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေး. အစားအစာ hemlevererad ရဖို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ showering နှင့်အတူကူညီရကုလားကာပြောင်းလဲနေတဲ့ကနေအရာအားလုံး. ဒီမှာပို Read.
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်းHärnösands diocese ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်Anundgårdတည်ရှိသည်. အဆိုပါဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ 1903-1904. အများစုမှာဖွယ်ရှိ Holmes စီရင်စုနယ်ဘုရားကျောင်းစတုတ္ထ. ထိတှေ့: 060-910 09
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့် Holmes စီရင်စုနယ်အကြောင်းကိုပိုမို Read.
Holmes ရဲ့ပန်းရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Holmes စီရင်စုနယ်များတွင်အဆုံးသတ်မှတဆင့်ကူးစက်သောထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေနှင့်လှူဒါန်းငွေကိုပေးနိုင်ပါသည်များအတွက်. ဒီမှာပို Read.
alt +. 0692-300 39
Holmes ခရိုင်အတွင်းရှိစာတိုက်ပုံးများ. သင့်ရဲ့ packages များအိမ်ပြန်အခမဲ့ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ Get နှင့်lantbrevärarenမှဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်. သင့်ရဲ့စာတိုက်ပုံးပေါ်မှာအိတ်နှင့်အတူနေအိမ်စာတစ်စောင်ပို့ပါ.
ထိတှေ့: Post ကိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု 020-23 22 21,
Post ကို Ombudsman နှင့် ICA Liden 0692-100 26.
ဒီနေရာတွင်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့စွန့်ပစ်အများစုဖတ်ရှုနိုင်သည်, အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်, အားကစားကလပ်သတ္တုစုဆောင်းခြင်းနှင့် Holmes အတွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသောအမှုအရာ, ပိုပြီးဖတ်ပါ.
လက်မခုနှစ်တွင် (မြေပုံ / လမ်းညွှန်ချက်), 15ကီလိုမီတာ / 20min
ဆေးဆိုင် – 0771-405 405.
ကနျြးမာရေးစင်တာ – 0692-439 20 (အကြံပေးခြင်း။: Tel. 1177).
ဆုတ်ခွါခြင်း – 0692-103 04.
ကမ်း – 0692-60960.
တိုင်းပြည်စတိုးဆိုင် – 0692-10026. ဒါ့အပြင်ကိုယ်စားလှယ်၏:
– Systembolaget. ဖုန်းဖြင့်အမိန့်။: 0692-100 26. Leveransschema နှင့် အမြိုးတလိုကျခှဲခွားခွငျး.
– Posten – ထောက်ပံ့: 020-23 22 21, Nacksta မေးလ်စုစည်းခြင်း (paketlev ။): 010-436 63 29
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ဓာတ်ဆီဘူတာရုံ – 0692-10016. ဒါ့အပြင်ကိုယ်စားလှယ်၏:
– ဆွီဒင်အားကစားပြိုင်ပွဲ – ထောက်ပံ့: 0770-11 11 11.
(ATG-အေးဂျင့်များ Sundsvall မှာဖို့လမ်းအပေါ်အနီးဆုံးများမှာ Kovland ကို kiosk (karta))
လေထုထဲတွင် alpollen ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်.